Ny alika mandehandeha amin'ny Bus amin'ny Weather mangatsiaka nampandeha ireo mpandeha | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAMorontsiraka mediteraney Tiorka07 AntalyaIlay alika izay nialoka tao anaty fiara fitaterana tamin'ny andro mangatsiaka dia nandana ireo mpandeha tao anatiny
Ilay alika izay nialoka tao anaty fiara fitaterana tamin'ny andro mangatsiaka dia nandana ireo mpandeha tao anatiny
22 / 01 / 2020 07 Antalya, Morontsiraka mediteraney Tiorka, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA
Amin'ny toetr'andro mangatsiaka kosa no namindro ny fiara tao anaty fitaterana
Ilay alika, izay nialokaloka tao anaty bus tamin'ny andro mangatsiaka no namindro anay. Ilay alika, izay namoy ny tompony tany Antalya ary mazoto amin'ny andro mangatsiaka, dia nialoka tao anaty fiara fitateram-bahoaka 07 AU 0180, izay nanao dia teo anelanelan'ny zotra Varsak-Faculty. Ilay mpamily Taner Özgün, izay nampiantrano ny alikany tsara tarehy tamina fiara fitaterana nandritra ny 1.5 ora, dia natolony ho an'ny mpiasa ao amin'ny Tranok'aretina Antalya Metropolitan Derelict Animal Temporary Care House amin'ny fanantenana ny hananan'ny tompony.
Tany Antalya, izay niainan'ny andro mangatsiaka, dia nisy hetsika iray nahatonga azy ireo nitsiky. Alika iray izay nialoka tao anaty fiara fitateram-bahoaka no nandeha fitsangantsanganana teny Antalya hiarovana amin'ny hatsiaka. Tao amin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina VF01 no niseho ny zava-nitranga, izay nanao ny dia Varsak-Faculty. Mandeha alika ny mpamily bus Taner Özgün raha naka mpandeha tamin'ny 100. Nijanona i Yıl ary niditra anaty bus. Ny mpamily bus Taner Özgün dia tsy nidina ny alika izay noheveriny fa handeha amin'ny bus izy mba handosirany avy amin'ny rivotra mangatsiaka any ivelany.
TSY MBOLA NITIAVANA NY VIDEO
Ilay alika, izay malahelo amin'ny fomba fanetren-tenany sy fihetsiketsehana mahafinaritra, nandeha niaraka tamin'ny mpandeha tao anaty bus mafana. Ny feon'ny fieritreretan'i Özgün, izay mpankafy biby ihany koa dia tsy namela ny alika, izay nahazo leash, ary toa hita fa nahavita ny nataony, teny an-dalana. Nijanona tao anaty fitaterany izy mandra-pahatonga 1.5 ora teo. Ilay mpamily dia nitondra ny alika fitsidihana ho an'ireo mpiasa ao amin'ny Antalya Metropolitan Municipality Unattended Animal Temporary Care House amin'ny fanantenana ny famerenana ny tompony.
MISAOTRA NY ZAVATRA MISY
Ny filazana fa ny alika dia natao tsara nandritra ny dia ary nanaraka ny baiko rehetra, 07 AU 0180 mpamily fiara fitateram-bahoaka tsy miankina Taner Özgün, izay niresaka ny zava-nitranga dia nanazava: Tamin'ny 01 maraina, dia nitsambikina tamin'ny fiara fitateram-bahoaka teo amin'ny fijanonan'ny fiara fitaterana teo amin'ny 13.10 i Yıl Avenue. Nihevitra aho fa hatsiaka izany. Azoko fa biby dia misy taolana eo amin'ny tendany ary manatanteraka ny baiko rehetra lazaina. Nahafinaritra sy tsara fanahy tokoa izy. Nangataka iray tamin'ireo mpandeha aho mba hitazomana miaraka aminy. Nijanona teo amin'ny aotobisy izy, teo amin'ny fijanonan'ny Faculty of Medicine. Izahay dia voasambotra mba tsy ho very ary hapetinay anaty fiara fitaterana. Nantsoiko tamin'ny ambaratonga biby fiompy biby ao Metropolitan aho amin'ny fanantenana fa hahita ny tompony. Rehefa avy nijanona teo amin'ny bus nandritra ny 100 ora teo aho dia natolotro an'ireo manamboninahitra tamin'ny fijanonana farany tao Varsak. Ny feon'ny fieritreretako dia tsy namela azy hamela azy eny an-dalana irery. Manantena aho fa hivoaka haingana ny tompony raha vao azo atao.
TORA GOLDEN RETRIEVER
Ny vazaha momba ny fikolokoloana momba ny biby dia miarahany amin'ny Sampana misahana ny fahasalaman'ny biby ao amin'ny Antalya Metropolitan munisipaly, izay nandray ilay alika, dia voalaza fa ny alika dia alika vavy iray alika vavy tokony ho iray taona sy tapany ary tsy nisy olana tamin'ny fahasalamana. Ilay alika, izay heverina ho tompony ihany, dia miandry ny tompony ao amin'ny trano fitsaboana fikarakarana ara-biby ao Metropolitan, Stray Animal Temporary Care House.
Mangatsiaka alika mandritra ny fiandrasana tram
ITU Ayazaga toby fiaran-dalamby voaro amin'ny hopitaly amboletra
Ny Filoha Kalaycı dia manolotra Iftar hisahana ny mpandeha
Ny fitaterana entana amin'ny làlana Silk eo anelanelan'i Shina sy Alemana dia hampitombo ny velaran'ny 2.5
Fampandrenesana Tender: Fiantohana ho an'ny lozam-pifamoivoizana an'ny mpandeha nitondra fiara tamin'ny IETT…
Ny fangatahana fitaterana elektronika ho an'ny fiaran-dalamby ary fiara fitateram-bahiny manomboka
Miaraka amin'ireo mpandeha fiaran-dalamby mandeha amin'ny zotra Ankara-Konya-Ankara, YHT ile
Alika fialokalofana ao anaty bus amin'ny andro mangatsiaka
Vars bus Faculty bus
Ny masoivoho ao Japon dia nitsidika ny Chivn'ny varotra sy indostria Sivas